Onye Ọzụzụ Atụrụ German bụ Husky Mix: Anya Na-omimi Banyere Gerberian Shepsky - Dịrị
Onye Ọzụzụ Atụrụ German bụ Husky Mix: Anya Na-omimi Banyere Gerberian Shepsky
Na electric-acha anụnụ anụnụ anya na N'ụbọchị nke abụọ, ndị German Shepherd Husky mix bụ a crossbreed nke Onye Ọzụzụ Atụrụ German (GSD) na Saịberịa Husky .
Ngwakọ a na-aga ọtụtụ aha otutu, gụnyere Gerberian Shepsky, German Husky, na Siberia Shepherd.
Ndị nkịta a na-emepụta ihe na-ejupụta n'ike ma dị ịhụnanya, njikere, na ọgụgụ isi . Na mgbakwunye, ndị dike a dị ụtọ na-atọ ụtọ ịnọ gburugburu n'ihi ntakịrị agwa ha.
Kedu ihe kpatara na anyị agaghị amata nnukwu ngwugwu ọ joyụ nke bụ Husky Onye Ọzụzụ Atụrụ ?
Kedu ihe malitere ngwakọta German Shepherd Husky?
Kedu ihe ngwakọta a German Shepherd Husky dị?
Okike a ọ bụ nkịta dị ize ndụ?
Kedu ihe chọrọ ọrụ nke Husky-GSD crossbreed?
Etu ị gha esi azụ ọzụzụ German Shepherd Husky
Nlekọta maka German Shepherd Husky Mix: ihe ị kwesịrị ịma
Ego ole ka ọ ga-eri iji nweta German Shepherd Husky mix?
Ndi German Shepherd Husky gwakọtara nkịta kwesịrị ekwesị maka gị?
Readinggụ Ọgụgụ: More Siberia Husky mixes & German Shepherd mixes
Osisi a bụ ngwakọta nke canines abụọ dị ike ma ama maka ha iguzosi ike n'ihe na ọgụgụ isi . Ọ dịtụ ọhụrụ na ụwa nke ndị nkịta na-emepụta ihe, yabụ amachaghị banyere akụkọ ihe mere eme ya.
Ihe anyị nwere ike ime bụ ileba anya na ụdị nne na nna ọ bụla na ihe nketa ha nyere German Husky.
Husky Siberia na mbido ya
Na Saịberịa Husky adịla kemgbe ọtụtụ narị afọ, nke ndị Chukchi nke Siberia ji mee ihe na-adọpụ akpọnwụ na ìgwè anụ ụlọ . Ha nwere ike ihu igwe site na ihu igwe siri ike ma bụrụ ndị a maara dị ka canines na-arụsi ọrụ ike.
Achọpụtara ndị a dị ọcha maka ha ntachi obi na ọsọ ma mesịa kpọta ha na Alaska ka ha sonye na agbụrụ Arctic na mpaghara ahụ.
Ejiri Huskies mee ihe karịa naanị ịgba ọsọ, kwa. Admiral Byrd jiri Huskies mee ihe n'etiti 1900s maka njem njem Antarctic . Nkịta ndị a jekwara ozi na Ngalaba Nchọpụta na Nzọpụta Ndị Agha n'oge Agha Worldwa nke Abụọ.
Ma canines ndị a kachasị dị ịrịba ama ga-abụ na-eme ka azọpụta ndụ na-agba ọsọ na-agba ọsọ na Nome, Alaska ibunye diphtheria antitoxin.
Musher Leonhard Seppala na Siberia Huskies Balto na Togo duru otu nkịta ndị sled na-agba ọsọ 674 - nke a kpọrọ Nnukwu Ọsọ Ebere - na ha mechara naanị ụbọchị ise na ọkara.
Ndi American Kennel Club (AKC) nyere ndi Siberia Husky ikike inabata ya 1930 . Na 2018, AKC weputara Huskies dika 14th ụdị ewu ewu kachasị ewu ewu na United States.
Onye Ọzụzụ Atụrụ German na akụkọ ihe mere eme ya
Echiche nke ịkpụpụta ntutu ogologo ntutu dị mkpụmkpụ, nke dị mkpụmkpụ, na nke nwere waya waya ìgwè nkịta na nkịta ugbo amuru umu nke anyi maara ugbu a dika Onye Ọzụzụ Atụrụ German .
Aha mbụ Onye Ọzụzụ Atụrụ German nyere aha ahụ Horand von Grafrath site n'aka onyeisi ndị agha Germany, Max von Stephanitz. Ekwenyere na ndị ọzụzụ atụrụ German niile sitere na Horand.
Enwere ike ịkọ akụkọ ntolite nke ndị a na-egbu oge 1800s , na mbụ ha hụrụ na Hanover na 1882 na mgbe e mesịrị na Berlin na 1899.
Site na 1907, ndị GSD pụtara na US. N'oge na-adịghị anya, American kennel Club mara ọkwa nke a.
Na 2018, ndị ọzụzụ atụrụ German nwetara Ebe 2 n'ime AKC kachasị ewu ewu na nkịta .
Ihe nkiri ndị a ma ama dịka Strongheart na Rin-Tin-Tin nyere aka mee ka ewu ewu German Shepherd. A maara ụdị a maka ịbụ mara ihe, nwee ntụkwasị obi, ma na-erube isi .
Recognitionkwanyere ugwu maka Husky-Shepherd ngwakọ
N'adịghị ka Siberia Husky na GSD, ọ bụghị ugbu a ghọtara ya American Kennel Club . Imirikiti crossbreeds anaghị enweta nnabata gọọmentị site n'aka AKC.
Nke a ngwakọ, Otú ọ dị, ghọtara site American Canine ngwakọ Club na Dog ndekọ nke America Inc.
Gerberian Shepsky na-bụ nnukwu nkịta na a muscular wuru .
O nwere aru toro ogologo ma sie ike ma nwekwa ụkwụ siri ike, tinyekwa ọdụ ogologo na ọdụ.
Njirimara ndị a na-enye ụdị obe a ọdịdị siri ike ma mara mma .
N'iji anya yiri anụ ọhịa wolf, canines ndị a nwere isi ogologo ma pịrị ọnụ, ogologo, imi oji isi ike, ntị kwụ ọtọ, na ikechi ọnụ siri ike.
Dị ka nne na nna Husky, onye ọzụzụ atụrụ Siberia na-enwekarị iche, almọnd yiri, na-egbu maramara ndị bụ ma aja aja ma ọ bụ acha anụnụ anụnụ.
Ọtụtụ n'ime ngwakọ ndị a nwekwara anya dị iche iche ma ọ bụ nwee agwa.
Ha nwekwara a ok, okpukpu abụọ, uwe na-enweghị mmiri nke ahụ dị nro ma na-agbanwe agbanwe.
Uwe mkpuchi ya nwere ike ịdị site na oji, aja aja na oji, ọbara ọbara, acha anụnụ anụnụ, na ọcha, na agba aja aja na ọcha, ude, nnu na ose, ọla edo, ọkụ aja aja, na isi awọ na aja aja.
Kedu otu nnukwu Gerberian Shepsky na-enweta?
A crossbreeds-eto eto na nkezi elu nke 20 ruo 25 sentimita asatọ (51 ka 64 cm) , nke dị ka ogo ha dịka nne na nna ha dị ọcha.
Ha nwekwara ịdị arọ dị n'etiti 45 ruo 90 pound (20 ruo 41 n'arọ).
Nwoke German Shepherd Husky mix na-abụkarị ibu karia ndi ibe ya. Mụ nwoke na-erukarị ogo zuru oke maka crossbreed ma tụọ n'etiti 50 ruo 90 lbs (23 ka 41 n'arọ).
N'aka nke ọzọ, ụmụ nwanyị na-adịtụ ntakịrị, na-atụle naanị 45 ruo 72 lbs (20 ruo 33 n'arọ).
N’aka ozo, GSD-Husky mix mara na obu a dị nwayọọ ma dị jụụ crossbreed.
O nwere àgwà abụọ nke Onye Ọzụzụ Atụrụ German dịka onye nkịta na-arụ ọrụ ọkụ na Siberia Husky dị ka nnukwu nkịta ezinụlọ.
Ha nchebe nkịtị na-abịa site na usoro GSD ha mgbe ha nwere omume enyi , karịsịa na ụmụaka, si n'akụkụ Siberia Husky ha.
Ha dị mma na ụmụaka, mana ụdị ndị a nwere ike ịbụ na-enyo anụ ụlọ na ndị ọbịa ọzọ enyo .
Ha nwere ike ịbụ overprotective na territorial na nwere ike igosipụta ime ihe ike ike , ma ọ bụrụ na ejikọtaghị ya nke ọma na nwata.
German Husky na ịgbọ ụja
A maara na obe ndị a ga-adị ndị na-eme mkpọtụ na ndị na-emebiga ihe ókè , n’ihi ịhụnanya Husky nwere maka ịkpọ ụda olu na ọchịchọ GSD nwere n’ụzọ dị egwu.
Ya ejula gị anya ịnụ ka Husky-Shepherd gị gwakọtara ‘ịgwa gị’ okwu, na-ebe ákwá maka uche gị, ma ọ bụ na-agbọ ụja na obere nsogbu na ụlọ.
Tupu ị nweta ngwakọ a, ị kwesịrị iji nlezianya tụlee ma ọ bụrụ na mkpọtụ ahụ ga-abụ nsogbu nye ndị agbata obi gị.
Naanị gee ntị na mkpọtụ Onye Ọzụzụ Atụrụ Siberia a nwere ike ime:
Ma Onye Ọzụzụ Atụrụ German na Siberia Husky dị nkịta dị elu. Nwere ike ịtụ anya na ndị ọzụzụ atụrụ-Husky mix chọrọ ọtụtụ ọrụ ahụ na mkpali nke uche, kwa.
Dị ka nkịta na-arụsi ọrụ ike, ọ chọrọ Oge 120 na-emega ahụ kwa ụbọchị , nke a ga-ekewa n'ime ije elekere ogologo oge ugboro abụọ. Ngwakọ ndị a nwere ume zuru ezu ime gburugburu 11 kilomita nke ije kwa izu.
Ekwesịrị inwe ohere zuru ezu n'ụlọ gị maka nkịta gị iji na-agagharị na nyocha. Ma ọ bụghị ya, were nwa nkita gị mee ihe na ogige nkịta ruo awa ole na ole nke ịgagharị, ịgagharị na igwu egwu na nkịta ndị ọzọ.
Anata, ejide frisbees, na flyball bụ oké ọrụ ị pụrụ ime na gị German Onye Ọzụzụ Atụrụ-Husky mix. Egwuregwu ndị a na-arụ ọrụ ga-enye ya oke kwa ụbọchị mkpali nke uche na nke aru .
Mmega ahụ zuru oke kwa ụbọchị na-enyere aka igbochi omume nkịta gị. I nwere ike izere nsogbu ndị dịka ịgbọ ụja gabiga ókè, ịta ata, na mkpu ákwá site na idebe nkịta gị ụbọchị dum.
Nyere ọrụ ya chọrọ, nke a nwere ike ọ gaghị abụ ezigbo anụ ụlọ maka ndina ndina ma ọ bụ ndị nwe ya chọrọ ka nkịta zuo ike.
Nke a bụ amamiihe na ukwuu trainable nkịta. O nwere ike iburu obere ọrụ mgbe ọ gụchara akwụkwọ ole na ole wee rube isi ka enyere iwu izizi.
Ọ na-anụ ọkụ n'obi mgbe niile ịmụ ihe na ime ihe onye nwe ya na-atọ ya ụtọ, yabụ ọzụzụ kwesịrị ịbụ ihe na-akwụghachi ụgwọ
Ọ dị mkpa ịmalite mmekọrịta mmadụ na ibe ya ebe ọ bụ na ọ ka bụ nwata. Trainingzụzị Onye Ọzụzụ Atụrụ Siberia nke ọma kwesịrị ịgụnye nkwụsi ike, nkwụsi ike, na nkwado dị mma iji nweta nsonaazụ kacha mma.
Ọzụzụ agility bụkwa ezigbo ụzọ iji jigide obe a, ọkachasị ebe GSD kacha mma na egwuregwu a.
Ọrụ a gụnyere na-agba ọsọ n'ụzọ ihe mgbochi na-erube isi n'iwu ụfọdụ onye nkụzi nyere ha. Ike enwere ike ime n'ọtụtụ ogige ntụrụndụ obodo nke nwere ngwa dị ngwa.
Onye Ọzụzụ Atụrụ German na ikpe nkịta nkịta
Mụta ime iwu dị mfe dịka “Ịnọdụ ala,” “nọrọ,” “gawa,” na “ikiri ụkwụ” tupu ịmalite nkịta gị na ọzụzụ ọzụzụ. Weta ọtụtụ ọgwụgwọ iji gbaa nwa nkịta gị ume ka ha na-amụ ihe.
N’okpuru bụ ụfọdụ ndụmọdụ kachasị mma nwere ike inyere gị aka ịzụ nwa nkịta Husky-GSD.
1. Bido zụọ nwa gị ozigbo.
Mmekọrịta, ọzụzụ ụlọ , na ọzụzụ nrube isi kwesịrị ịmalite mgbe nkịta gị bụ nwa nkịta.
Wayzọ a, gị nkịta na-amụta otú kwesịrị ekwesị na-emekọ ihe na gburugburu ebe obibi ya na adopts kwesịrị ekwesị omume, nke ị ga-mkpa na gị kwa ụbọchị eme.
Otu-na-otu nwa nkita na-emekwa ka nkekọ dị n’etiti gị na nkịta gị sikwuo ike.
2. Na-edu ma hụ nwa nkịta n'anya n'anya tupu ịmalite ha na ọzụzụ ọ bụla.
Nkịta bụ anụmanụ ndị sitere n'okike, nwa nkịta gị chọkwara ka ị bụrụ onye ishi ndu achịjeru Nchileke ẹja .
Ga mgbe niile nwere okwu ikpe-azu na pup gị ga-amụta na iwu gị agaghị agbagha.
Otú ọ dị, nke a apụtaghị imebi nkịta gị. Gị German Shepherd Husky mix chọrọ ịhụnanya gị, nlekọta, na ntụkwasị obi dịka nduzi gị.
3. A ga-eji nkwalite dị mma mgbe niile.
Wardsgwọ ọrụ na otuto dị mma karịa ntaramahụhụ na ị na-achịkwa nkịta gị.
Kọọ ọzụzụ na iwu mmetụta uche dị mma na ngwakọta Husky-Shepherd gị ga-amụta ezigbo omume ngwa ngwa.
4. Mee ka oge ọzụzụ gị dị mkpirikpi.
Enwere ike dọpụ puppy Gerberian Shepsky puppy, yabụ ị ga-anọrịrị oge ọzụzụ Nkeji iri ruo iri abụọ . Oge dị mkpirikpi na-ejide n'aka na nkịta gị nwere mmasị ịmụ ihe ọhụrụ.
Ọ ga-abụ ezigbo mma na-akpakọrịta a hapụ okwu mgbe ọ bụla ị gụsịrị ọzụzụ gị ka nwa nkịta gị wee mara na ọ gwụala maka ụbọchị ahụ.
Nkwupụta dị mfe dị ka 'gwụchara' kwuru nke ọma ma jiri obi ụtọ kwesịrị ezu.
5. Ọzụzụ gụnyere iwu dị nkenke ma doo anya.
Onye ọzụzụ atụrụ gị Husky ga-eso iwu gị dabere na otu o si atụgharị ha.
Iwu gị kwesịrị ịbụ doro anya ma dị mfe nghọta ka nkịta nkịta gị ghara inwe mgbagwoju anya na usoro ọzụzụ ga-adị irè.
Ighaghachi iwu bụ isi mgbe nkịta gị mụtara ya dị mkpa.
6. Akụzi nwa nkita gị otu aka ọrụ otu oge.
Bugharịa na a ọhụrụ ihe n'ọzụzụ gị naanị mgbe nkịta gị mụtara ihe mmụta ma ọ bụ nka gara aga.
Nke a na - egbochi gị ịp ụta ka ị ghara inwe mgbagwoju anya na im ụ ị ụ ị ị iwu ọ g ị ozigbo.
7. Eji ihe eji eme ihe na ntanye anya.
Belata ojiji nke ọgwụgwọ n'ihi na ọtụtụ ọgwụgwọ ga-eme nkịta gị buru ibu , na ịdị irè nke ọgwụgwọ n'oge ọzụzụ na-ebelata.
Ọzụzụ Leash dị mma, mana ọ gaghị adị mkpa iji ya mee ihe karịsịa mgbe nwa nkita gị na-enweghị ihe iyi egwu nye ndị ọzọ.
Youchọrọ ka nkịta gị rubere gị isi na nke ya free uche , ọ bụghị n'ihi na ọ na-eche egwu ma ọ bụ na-ejedebe ya.
8. Chọọ enyemaka ndị ọkachamara mgbe ịchọrọ ya.
Mgbe nwa nkita gi na egosi ihe mbuso agha ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ na-adị isi ike n'agbanyeghị nkuzi gị ugboro ugboro, tụlee ịchọ enyemaka nke onye nkuzi ọkachamara.
Onye na-enye ọzụzụ ọkachamara ga-ama ihe ị ga-eme iji gbochie omume pooch gị na nyocha.
Kpachara anya: German Husky chọrọ ntakịrị ihe TLC karịa ọtụtụ crossbreeds.
Otú ọ dị, ị ga-achọpụta na mgbalị gị ga-aba uru mkpakọrịta na iguzosi ike n'ihe nkịta a nwere ike inye gị.
Ego ole ka nkịta a ga-eri?
Ha chọrọ ma ọ dịkarịa ala Iko 3 nke nri nkịta kwa ụbọchị , kewara abụọ servings. Ọ kachasị mma ịga maka kibble dị elu nke nwere ọdịnaya bara ụba na protein.
Ha chọkwara ma ọ dịkarịa ala 25% protein mgbe na-eri ọka na 30% protein na atụmatụ iri nri na-enweghị ọka.
Nkịta gị ga-erite uru na nkwonkwo mmeju , nke ga - agba ume uto nke cartilage ma nyere aka meziwanye njem. Nke a nwere ike inye aka karịsịa maka nkịta na-arụsi ọrụ ike dị ka obe Shepherd-Husky.
Enwere ike itinye mkpụrụ osisi dịka apụl, blueberries, oroma, aki oyibo, ube, watermelons, na painiapị na nri Gerberian Shepsky gị, mana ndị a nri ekwesịrị inye n'ime achịkwa ego .
Ihe ị gaghị eri Gerberian Shepsky gị
Nkịta nwere vitamin C zuru ezu na imeju ha, yabụ ọ dịghị mkpa inye nkịta gị ọ bụla Nri vitamin C bara ụba .
Ikwesighi inye nkita gi nri ọka na nri juputara na fiber ma ebe ọ bụ na ndị a enweghị ike ịkụtu site na usoro ha.
Eyịm, chocolate, ice cream, ma ọ bụ ọkpụkpụ ham ekwesighi inye nkịta ndị a ebe nri ndị a nwere ike imebi ọrụ ha.
Na, n'agbanyeghị ka German Husky gị si rịọ, zere inye ya nri nnu dị ka popcorn ma ọ bụ nduku ibe .
Intake intakeụ oke nnu nwere ike ibute afọ ọsịsa, agbọ agbọ, na ihe ọdị gị nkịta.
Gba mbọ na German Shepherd Husky mix
Onye German Shepherd Husky mix nwere ọkpụrụkpụ uwe elu abụọ , nke ọ na-enweta site na Siberia Husky na Onye Ọzụzụ Atụrụ German.
Uwe a mara mma nke crossbreed chọrọ nlekọta oge niile ebe ọ bụ na ọ bụ a akwa ebu .
Na-asa ezé ugboro abụọ ma ọ bụ atọ kwa izu ga-eme ka uwe nwa nkita gị na-egbuke egbuke, dị nro, na enweghị tangles. Ihichapu ihe mgbe niile na-enyere aka ịkwafu ma chịkwaa ntutu nwụrụ anwụ na uwe ahụ.
Oge okpomọkụ bụ mgbe Husky Shepherds wụsịrị ihe kachasị. Ichapu kwa ụbọchị kwesiri ime ihe a, obu ezie na odi njikere ime ihe ziri ezi nke ikpochapu gi ozugbo emere ya.
Osisi a na-atọ ụtọ na mmiri nke ukwuu ka ịsa ahụ ghara ịbụ nsogbu. Saa ahụ nkịta gị naanị mgbe ọ dị mkpa ya mere, ọ gaghị ewepụsị mmanụ ala ya na kootu ya.
Nnyocha ntị na nhicha kwesịrị ime otu ugboro n'izu . Jiri akwa mmiri mmiri wepụ ihe dị arọ nke wuru na ntị canine gị. E kwesịkwara inyocha anya ya . Ọ bụrụ na e nwere egbe ọ bụla na nkuku nke anya nkịta gị, kpọtụrụ onye na-elekọta gị ozugbo.
Ntu kwesiri ibu gbupụrụ otu ugboro n'ọnwa zere oké pow mgbu gị nwa nkịta. Mee ka mbọ mbọ pooch gị belata site na onye na-edozi edozi ọkachamara ma ọ bụrụ na ọ naghị adị gị mma ime ya n'onwe gị.
Ghichaa ezé nke nkịta gị otu ugboro kwa ụbọchị . Lezienụ anya maka ihe ịrịba ama nke ihe edere ede. Ọkpụkpụ, kibble akọrọ, na ị andụ ihe egwuregwu ụmụaka ga-enyekwa aka n’ilebe ezé pup gị ọcha.
Okwu ahụike maka onye ọzụzụ atụrụ Siberia
Ekwuru na Crossbreeds siri ike karịa purebreds. Agbanyeghị, ngwakọta German Shepherd Husky nwere ike bụrụ nke ụfọdụ na-adakarị nnukwu ọnọdụ ahụike ka o we keta nne na nna ya.
N'okpuru bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị nsogbu ahụike nkịtị na ngwakọ a nwere ike ịta ahụhụ site na:
Ikiaka na hip dysplasia - Nke a na - eme mgbe nkwonkwo wee kwụsie ike ma ọ bụ tọpụ. Enwere ike izere nke a site na ịchekwa Gerberian Shepsky na ahụike dị mma ka ọ ghara itinye nrụgide na-enweghị isi na nkwonkwo ya.
Corneal dystrophy - Nke a bụ ọnọdụ ebe ihe na-adịghị mma na-agbakọ na akwa anya ma ọ bụ na cornea. Ọ na - amalite nwayọ ma na - emetụta anya abụọ ma nwee ike bute ọhụụ.
Ọganihu retinal na-aga n'ihu - Nke a nsogbu anya nwere ike ime na ndụ nke nkịta gị ma nwee ike iduga ìsì ma ọ bụ zuru oke. Fọdụ mgbaàmà izizi gụnyere ikpu ìsì n'abalị, enweghị ike ịhụ ụzọ n 'enwu gbaa, yana ụmụ akwụkwọ etinyere.
Ọkpụkpọ ụmụaka - Ọrịa a nwere ike ọ gaghị amalite ruo mgbe nkịta dị afọ isii. Anya ’anya m na-abụ nke ọhụụ ma na-ebute ntakịrị nzuzu n'ọhụụ ka ikpu ìsì zuru oke na nnukwu ikpe.
Ọnọdụ ahụike ndị ọzọ German Husky nwere ike ịgụnye nsogbu ọbara , uwe elu, na akwụkwụ na-adọ
Ogologo oge ole ka ụdị osisi a dị ndụ?
Gị German Shepherd Husky mix nwere nkezi ndụ 10 ruo 13 afọ . O nwere ike ịdị ogologo ndụ karịa nke ahụ, dabere n'ihe ndị dịka nri, ahụike, mkpụrụ ndụ ihe nketa, na ogo mmega ahụ ya.
Kpachara anya mgbe niile maka ihe ọ bụla mgbaàmà nke ọrịa n'ime nkịta gị. Egbula oge gakwuru onye nlekọta gị mgbe ị hụrụ mgbanwe mberede na ahụ ma ọ bụ omume Husky-Shepherd gị.
Dabere na ebe ibi, ụgwọ mbụ dị ka ngwa, usoro ọgwụgwọ dị ka ịgba ọgwụ mgbochi na ịpụpụ nwere ike ịbụ $ 415 na $ 500 .
Nlekọta ahụike kwa afọ dị ka nlele n'etiti $ 485 na $ 600 .
N'aka nke ọzọ, ụgwọ a na-akwụghị ụgwọ maka ahụike kwa afọ dịka ọzụzụ, nri, na ọrụ nlekọta ndị ọkachamara, nwere ike ịbụ ihe ruru $ 1100 .
A German Shepherd Husky mix puppy ga-eri gburugburu $ 350 ka $ 850 , ná nkezi.
You nwere ike ile anya Saịberịa Husky na Ndị na-azụ atụrụ German Shepherd maka ozi ebe ị ga - azụta ụdị nkịta ndị a:
Oghere Ugwu Ndị Ọzụzụ Atụrụ German (Pensụlvenịa)
Berglọ Ndị Ọzụzụ Atụrụ Amberg (California na Virginia)
N'aka nke ọzọ, enwerekwa doro weebụsaịtị ileta ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịnakwere nwa nkita GSD-Husky. Lelee Nnapụta Arctic (Utah), Kylọ Husky (New Jersey), ma ọ bụ Nnapụta German Onye Ọzụzụ Atụrụ German (Los Angeles) maka ozi na ịmụta
Ọ bụrụ na ị na-achọ enyi na enyi, ike dị elu iji bụrụ enyi enyi gị kwesịrị ntụkwasị obi ruo ọtụtụ afọ na-abịa, mgbe ahụ Gerberian Shepsky doro anya na ọ dị mma maka gị.
Gerberian Shepskies bụ ndị enyi na-ahụ n'anya . Ha bụ ụfọdụ n'ime ndị nkịta nche kacha mma gburugburu, ọgụgụ isi ha na-emekwa ka ọ dịrị ha mfe ịzụ.
Otú ọ dị, canines ndị a chọrọ ọtụtụ mmega ma ọ nwere ike ọ gaghị adabara ndị nwere ibi ndụ ịnọ otu ebe. Ha na-awụsịkwa akwa ma na-achọ ka edozi ha kwa ụbọchị.
You chere na nkịta a ruru mgbalị a? Ikwu okwu n’okpuru ma ọ bụrụ n’inweela ahụmịhe na Gerberian Shepsky.
oke ala collie mini aussie mix
boston terrier ma ọ bụ French bulldog
oke ehi mastiff agwakọtara ya na ụlọ nyocha
ụlọ nyocha edo edo na ngwakọta ọkpọ
rottweiler agwakọtara ya na ọnyà
onye na -eweghachi ihe mkpuchi cocker ọla edo zuru oke